Paris Saint-Germain ayaa ku dhawaaqday magacaabista Mauricio Pochettino inuu noqdo tababarahooda cusub ka dib markii shaqada laga ceyriyay Thomas Tuche.
PSG ayaa soo gabagabeysay labadii sano iyo badh ee uu hogaaminayay Tuchel usbuucii la soo dhaafay waxayna ku guuleysatay labo horyaal oo Ligue 1 ah oo isku xigta, Coupe de France iyo Coupe de la Ligue, marka lagu daro inay gaareen finalka Champions League. qabtay kooxda markii ugu horeysay taariikhdeeda, laakiin nasiib daro Bayern Munich ayaa 1-0 ku garaacday.
Mauricio Pochettino, oo koox la’aan ahaa tan iyo markii uu ka tagay Tottenham bishii Nofeembar 2019, ayaa ugu dambeyn loo magacaabay tababaraha PSG.
Xiddiga reer Argentine, oo lala xiriirinayay qaar ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Yurub, sida Real Madrid, Manchester United iyo Juventus, ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Paris Saint-Germain sannadaha soo socda.
Pochettino wuxuu tababarenimo ka bilaabay kooxda Espanyol ee dalka Spain sanadihii 2009 ilaa 2012 ka hor inta uusan u dhaqaaqin Premier League kana soo dhaqaaqin Southampton una dhaqaaqin Tottenham
293 kulan intii uu ku guda jiray xirfadiisa ciyaareed, oo u kala qeybsanaa seddexda koox ee Espanyol, Southampton iyo Tottenham, wuxuu guuleystay 160, wuxuu sameeyay 60 halka laga badiyay 73.
Wuxuu ku hogaamiyay Tottenham finalka Champions League ee 2019 iyo finalka League Cup ee 2015.
Magacaabista Pochettino ee maamulka PSG ayaa la macno ah inuu dib ugu soo laabtay kooxdiisii ​​uu u ciyaaray 2001 ilaa 2003.
Kusoo dhawow Mauricio Pochettino 👋 pic.twitter.com/sMXDA7p5Hh
– Paris Saint-Germain (@ PSG_inside) Janaayo 2, 2021
Mauricio Pochettino ayaa nasiib u yeeshay inuu hogaamiyo koox ku hubaysan qaar ka mid ah ciyaartoyda adduunka ugu fiican wuxuuna noqon karaa fure iyo magnet soo jiidashada wakiillada kale ee xorta ah xagaaga soo socda, sida Lionel Messi.
Turkiga ayaa xaqiijiyay dhalashada Turkiyiinta